» आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा बीमा दाबी भुक्तानी
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा बीमा दाबी भुक्तानी
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १९:४८
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले मकवानपुरका बीमित हिमाल पौडेललाई बीमा वापतको २३ लाख ७६ हजार ८ सय ४० को चेक हस्तान्तरण गरेको हो । काठमाडौंको मेडिसिटीमा उपचारत पौडेललाई अस्पतालले क्यान्सरको लक्षण पछि पौडेलले उपचार रकम वापत उक्त रकम पाएका हुन् ।
कम्पनीका बीमा अभिकर्ता लक्ष्मण कुमार महर्जनले गत मंसिर १७ गते उनका साथी हिमाल पौडेलको २५ लाख बराबरको जिवन बीमा गरेका थिए । यो जिवन विमा अन्तरगत २१ वटा प्राणघातक रोगबाट जोखिम युक्त सिईए (क्रिटिकल इल्नेस) धनसरिता जीवन बीमा रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका सिईओ कवि फुयाँल, एजेन्सी विजनेश प्रमुख कर्मराज पौडेल, प्रदेश २ का कम्पनीका प्रमुख रविशंकर सरार्फ, हेटौंडा शाखा प्रमुख सुमन घिमिरे, वरिष्ठ एजेन्सी म्यानेजर योग्यराज सापकोटा, मार्केटिङ म्यानेजर केबल बानियाँ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
सुनको मूल्य उकालोतर्फ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
नबिल बैंकले कुन मुद्दति निक्षेपमा कति ब्याजदर दिँदैछ ?
नेपाल एसबिआई बैंकको संचालक परिर्वतन
असोज महिनामा लक्ष्मी इक्विटी फण्डको सूचीकृत शेयरमा लगानी बढ्यो, नाफा र न्याभ घट्यो